Top 5 Free Online Photo Editors maka edezi Photos Online
> Resource> Free> Top 5 Free Online Photo Editors - Online Photo-edezi Ngwaọrụ
Top 5 Free Online Photo Editors - Online Photo-edezi Ngwaọrụ
Photo edezi bụ fun na-aghọ akụkụ nke ndụ ndị mmadụ na ewu ewu na nke ese foto. Mgbe ụfọdụ, i nwere ike chọrọ dezie ihe oyiyi ma ọ dịghị foto edezi software arụnyere na kọmputa gị. N'oge a, i nwere ike na-atụgharị ụfọdụ online foto editọ, nke bụ nnọọ adaba iji.
E nwere ụfọdụ oké free online foto editọ na ndị dị mfe iji. Ọ dịghị ahụmahụ nke ọkachamara foto edezi dị mkpa. Ọ bụ nnọọ dị nnọọ mfe na-ewetara gị photos na-esonụ larịị na enwetaghị ọha na eze anya!
Ebe a bụ ihe kacha mma 5 free online foto editọ n'ihi na gị dezie foto gị online na ala.
Free online foto nchịkọta akụkọ 1: Adobe Photoshop Express
Adobe si online image edezi ngwá ọrụ bụ a Flash dabeere image edezi ngwa n'ihi na ọrụ idezi foto na blọọgụ na-akparịta ụka n'Ịntanet. Ọrụ ike mfe ime photos anya mma ma na-eso ha site web veranda na foto nkekọrịta saịtị. Oké atụmatụ nke a free online foto edezi ngwá ọrụ na-agụnye touchup ngwá ọrụ, adụ na-elekwasị anya, nwa ọcha na ike, layering nke fixes na mmetụta, ohere nchekwa, osisi mmetụta, albums, na 3D online veranda, wdg
Free online foto nchịkọta akụkọ 2: Phixr
Phixr bụ ihe dị mfe na-eji online foto nchịkọta akụkọ na-interface yiri Microsoft agba. Na ya, i nwere ike resize oyiyi, tinye dị iche iche mmetụta, mix multiple oyiyi, wdg Ị mkpa aha ma na-a free akaụntụ n'ihi na ogologo oge ojiji. Ma, a ga-enwe ịgba maka ojiji oge.
Free online foto nchịkọta akụkọ 3: Picnik
Picnik bụ oké free online foto nchịkọta akụkọ na dị nnọọ mfe iji. Dị nnọọ bulite foto gị na-eso kensinammuo interface dezie foto gị. Oodles nke foto mmetụta, ederede Akara ókwú, shapes, foto okpokolo agba, wdg na-nyere. A adịchaghị version na ihe elu atụmatụ na-awa na a na-eri nke $ 25 a afọ.
Free online foto nchịkọta akụkọ 4: FotoFlexer
FotoFlexer enye gị ohere ịhọrọ foto site na kọmputa gị ma ọ bụ ụfọdụ mmadụ ịkparịta ụka n'Ịntanet saịtị dị ka Facebook, Flickr, Myspace, wdg Real-oge atụ nke edezi mgbanwe dị maka mma mgbanwe agbanwe. Ọ bụla ngwá ọrụ bụ nanị otu click pụọ! Ọ bụ nnọọ otú mfe na fun ike dazzling foto mmetụta maka free na nchọgharị gị.
Free online foto nchịkọta akụkọ 5: flauntR
The FlauntR online foto nchịkọta akụkọ-arụ ọrụ na a dịgasị iche iche nke-akparịta ụka n'Ịntanet na-achọ registration. Ọ na-enye ụfọdụ dị iche iche omume n'ihi na ị na-etinye dị iche iche mmetụta gị photos dị ka oyiyi edezi, styling, embellishments, wdg ka ihe atụ, na StylR, i nwere ike tinye a themed eku. Mgbe edezi, ị nwere ike ịmepụta a gallery na mbupụ na foto Cell photos na visual anam / nlereanya search engine. E wezụga na, ọ bụrụ na ị chọrọ ibipụta photos si, ị nwere ike na-aga na wuru na-ụlọ ahịa ịtụ Mbipụta, akwụkwọ ịma ọkwa, kaadị, wdg
Top 5 Free FLV ka MPEG Ntụgharị
Download Halloween akwụkwọ ahụ aja maka OS X Mavericks